Tsy Ny Faharesena Tamin’ny Eurovision No Tsy Mahafaly ny Rosiana, Fa Efa Tsy faly Talohan’izany Izy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2016 4:33 GMT
Sary niparitaka tamin'ny aterineto mampiseho meme “Fitaingenan'i Putin” nafangaro tamin'ny fampisehoan'i Sergei Lazarev.
Tsy ny faharesena tamin'ny isa tery nahazo an'i Rosia tamin'ny fifaninanana mozika 2016 Eurovision tamin'ity faran'ny herinandro ity ihany no fifanolanana tamin'ny fifaninanana feno jiro hazavana, pyroteknika sy fanindrahindram-pirenena. Na dia talohan'ny nandresen'ilay mpanakanto Okrainiana Jamala tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe “1944” miresaka momba ny famindra-toerana ireo Krimeana Tatars teo ambanin'ny fitondran'i Josef Stalin aza, dia ivon'ny tantara ratsy hafa manokana ny fizarana fomba fijery halam-bahoaka tamin'ny fanakambanana an'i Krimea amin'i Rosia ny solontena manokana an'i Rosia, ilay mpiangaly mozika pop Sergei Lazerov. .
Rehefa nahazo laharana fahatelo tamin'ny fanisana farany, noraisin'ny maro ho maherifo halan'ny firenena amin'izay hitan'ny Rosiana maro fa fifidianana misy ambadika politika i Lazerov. Talohan'ny naha-lasibatra an'i Lazerov ho manao “Russophobia (fankahalana an'i Rosia” na “tetidratsy pro-Okrainiana,” anefa, dia niteraka tsikera ny fanapahan-kevitra nametraka azy ho mpifaninan'i Rosia azy tamin'ny Eurovision noho ny fanamarihana nataony tamin'ny taona 2014 izay manohitra ihany ny fiandrianan'ny Rosiana amin'i Krimea.
Roa taona lasa izay, tamin'ny antsafa niaraka tamin'ny fantsona 1+1 Okrainiana, nilaza i Lazerov fa tsy mandray an'i Krimea ho anisan'i Rosia izy.
“Tsy ao anatin'izany hafaliana “Anay i Krimea” izany aho, hoy i Lazerov. “Angamba aorian'ity, hanomboka hitoraka voatabia ahy ny Rosiana mpankafy ahy, saingy ho ahy, ny mankany Krimea dia toy ny mandeha any Okraina. Izany no mahatonga ny olona rehefa manao fampisehoana ‘Anay i Krimea’ … tsia, tsy handeha handray anjara amin'izany aho.”
Nanameloka ny fanehoan-kevitr'i Lazerov momba an'i Krimea ireo Rosiana milaza tena fa tia tanindrazana tao amin'ny aterineto sy imasom-bahoaka. Dmitry Smirnov, mpanao gazety miaraka amin'ny mpanao gazetin'i Kremlin avy amin'ny gazety naman'ny governemanta Komsomolskaya Pravda, nandrahona hanao ankivy ny fifaninanana:
Sergei Lazarev: “Ho ahy, Okraina i Krimea. ‘Anay i Krimea’—Tsy manohana izany rehetra izany aho.” Tsy handray anjara amin'ny Eurovision ahy amin'ity taona ity.
Voarain'ireo mpihaino ao anatin'ny mpanjohy azy 26.000 ny tsy fananan'i Smirnov faharetana amin'ny fametraham-panontaniana momba ny fijoroan'i Rosia ao Krimea. Iray amin'ireo mpamaky azy aza nilaza mihitsy fa mety nisompatra ny fandraisan'anjaran'i Rosia tamin'ny fisafidianana solontena tahaka an'i Lazarev ireo mpikarakara ny Eurovision.
Toa tahaka ny fomban-drazantsika ny ho ratsy indrindra tamin'ny Eurovision? Sa mba mampiseho antsika ny fomba fahatsapan'izy ireo momba an'i Rosia fotsiny ny mpikarakara?
Taty aoriana, namerina indray ny fanamarihany momba an'i Krimea i Lazerov, nilaza fa navoakan'ny televiziona Okrainiana ny antsafa mba hilazana araka ny fiheverana fa nanohana an'i Kyiv izy fa tsy i Moskoa. Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny tambajotram-baovao mpomba ny Kremlin Lifenews, nanamafy izy fa tsy naniry mihitsy ho anisan'izay “fampielezan-kevitra” ara-politika, nilaza fa mbola tanora loatra izy ka tsy mahatsiaro ny fotoana namidran'ny Praiminisitra Sovietika Nikita Khrushchev an'i Krimea ho any amin'ny Repoblika Sosialista Sovietika Okrainiana tamin'ny taona 1954.” Ka ho ahy,” hoy ny teny ùandray roa nataon'i Lazerov, “sarotra sy tsy mahazatra ny mandeha lavitra isan-taona ho any Krimea, any Okraina, ary tampoka avy eo … lasa Rosia izany. “Fantatro fa olona maro no faly fa efa naverina amin'i Rosia i Krimea,” hoy izy. “Saingy mila fotoana hanekena izany ny tenako.”
Naminavina ny sasany tamin'ireo mpitsikera ilay mpiangaly mozika fa niezaka nanao izany tamin'ny fomba roa i Lazerov, mampitony ny Rosiana, no sady miantso ny fangoharan'ny anti-Rosiana eo amin'ireo mpifidy any ivelany sy ny mpitsaran'ny Eurovision.
Tsy mahagaga, nandritra ny roa taona lasa, niezaka nilaza faran'izay kely azo atao momba ny fomba fijeriny ny politika i Lazerov. Tamin'ny volana lasa, raha ny marina, tsy nanaiky tsotra izao haneho hevitra momba ny fanambaran'i Rosia mikasika amin'i Krimea izy, nilaza fa tsy mamaly fanontaniana ara-politika intsony izy.